China Stump planer vagadziri uye vanotengesa | Dongheng Machinery
Zvimiro zveedu stump planer
KINGER stump planer ine maviri mamodheru ayo anogona kubvisa 300mm kana 400mm dhayamita muti mudzi.
KINGER stump planer ine mbiri helix blade desgin, yakaoma simbi blade uye yakakosha yekucheka musoro musoro ine mushe mashandiro mumidzi dzinde kubvisa.
KINGER stump planer inogona kuiswa chero KINGER pasi pasi auger drive unit kuti ibvise midzi zviri nyore uye nekukurumidza.
KINGER Stump Planer chinongedzo chinobudirira chekupa rinowedzera basa nekuwedzera kugona kushandura yako KINGER yepasi auger chinongedzo muchiuto chakasimba kubvisa.Nokuwedzera iyi stump planer kune ako ekubatanidza renji, iwe unogona chengetedzo kubvisa miti stumps pasi pasina nyonganiso, ruzha uye ngozi.
Pamusoro pegadziriro ndeyedu stump planer maratidziro eako mareferensi Iwo anogona kuiswa pane chero auger drive unit kuti ishande.
Pashure: Kutsemura kwedanda
Zvadaro: Chisanganiso bhakiti